काठमाण्डौं, साउन २७
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइ सांसदहरुको समर्थन छ । नेकपा एक्लैको पनि झण्डै दुई तिहाइ संख्या रहेको बेला संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा आएपछि दुई तिहाइको संख्या कटेको हो । दुई तिहाइ मत भएमा संविधानले पनि धेरै विषयमा संशोधन गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ । वर्तमान राजनीतिक दलहरुले नै दुई तिहाइ मत भएमा संविधानका धेरै प्रावधान खारेज र आफूअनुकूल बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधान नै आफूअनुकूल बनाउन सकिने प्रावधान वर्तमान संविधानमा राख्ने काम कुनै एक राजनीतिक दलले मात्रभन्दा पनि अहिलेकै दलहरुले गरेका हुन् । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस संविधान बनाउने बेलामा सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले सरकारको नेतृत्वमा थियो । नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि विषयमा अडान लिएको भए संविधान बन्न समस्या पर्ने थियो । त्यसमा पनि संविधानको धारा संशोधनको प्रावधानको बारेमा त कांग्रेसको मतविना सम्भव नै थिएन । कांग्रेसको मत कुनै विषयमा मात्रभन्दा सरकारको नेतृत्व गरेको र त्यसमा पनि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएको कारण संविधानका ड्राफ्ट बनाउनेलगायतका विषयमा कांग्रेसको भूमिका अहिले सत्तामा रहेका दलहरुको भन्दा धेरै थियो । त्यही भएर वर्तमान संविधान लेखनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी अर्थात् अहिलेको नेकपा जति जिम्मेवार छ त्योभन्दा बढी जिम्मेवार कांग्रेस छ । जसले बहुमत ल्याउँछ त्यसले सरकार बनाउने र जोसँग संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत छ उसले संविधानका धाराहरुलाई आफूअनुकूल बनाउन सक्तछ र पाउँछ पनि ।
वर्तमान सरकार दुई तिहाइको भए पनि यसले दुई तिहाइको जसरी काम गरिरहेको छैन । उसलाई कांग्रेसलगायतका दलहरुले काम गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कांग्रेससँग वर्तमान सरकारका कामकाज रोक्ने सामर्थ नभए पनि सरकार भने कांग्रेसले यो पनि गर्न दिएन र ऊ पनि गर्न दिएन भनेर गुनासो गरेर बसिरहेको छ । संंविधानतः वर्तमान सरकारका कामकाजलाई अझै चार वर्षभन्दा बढी समय कसैले पनि रोक्न सक्तैन । उसले संविधानका कतिपय धाराहरुलाई उलटपुलट पारिदिन सक्तछ । सरकारका काम मात्र होइन सबै न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्तछ । त्यस्तै संवैधानिक अंगमा पनि अहिलेका नियुक्तिलाई हटाएर नयाँलाई नियुक्ति दिन सक्तछ । संविधानले नै दुई तिहाइ मतले यीलगायतका आफूअनुकूल काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । कांग्रेस र नेकपाले आ–आफूले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने आशमा संविधानका कुनकुन प्रावधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर किटान गरिदिएको छ । सरकारले काम गर्दै जाँदा के के समस्या आइपर्छ ती सबै समाधान गर्न आफूअनुकूल कानुन बनाउनुपर्छ । सरकारले चाहेको काम अरु दलहरुले चाहेको कानुनबाट पूरा हुन सक्तैन । आफ्नो काम गर्न आफैंले कानुन बनाउनुपर्छ । आफूअनुकूल कानुन बनाउने हैसियतमा वर्तमान सरकार छ । यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्तैन । सडक वा सदन जता आन्दोलन भए पनि सरकारले चाहेको काम हुने अवस्था अहिले छ । कुनै पनि दलको विरोधले काम रोक्न नसकिने अवस्था भएको बेला कांग्रेसलगायतका दलहरुले काम गर्न दिएन भनेर रुनु काम गर्ने हैसियत र क्षमता छैन भनेर स्वीकार गर्नु हो । २०४६ पछि अहिले जत्तिको सरकारलाई काम गर्न सजिलो कहिल्यै पनि थिएन । यस्ता अवसर दुनियाँमा कमै मात्र मिल्छ । त्यस्तै कम अवसरमध्ये अहिलेको ओली सरकारले पाएको छ । अहिले विपक्षले के भन्ला ? सडकमा कति विरोध होला ? सामाजिक सञ्जालमार्फत कति विरोध होला भनेर हेर्दै विश्लेषण गरेर बस्ने होइन । आफूलाई मन लागेको काम फटाफट गर्ने हो । राम्रो काम गरे जनताले फेरि चुन्छन् र नराम्रो काम गरे भने जनताले त्यसको बदला लिन्छन् । दुई तिहाइको सरकारले विपक्षीले काम गर्न दिएन भन्नु नै गलत छ । दुई तिहाइ हुँदा पनि विपक्षीले काम गर्न दिएन अब कति संख्या चाहियो भन्दै सरकारमा बसेकाहरु चुनावमा जानेछ । दुई तिहाइको बहुमतको सरकारले विरोधलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेन भने विपक्षीले अवसर पाउँछन् । दुई तिहाइले पनि काम गर्न सकेन हामी गर्छौं भनेर माग आउन थाल्छ । त्यही भएर अहिलेको सरकारले सबैलाई बेवास्ता गरेर आफूलाई मन लागेको काम गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नै पर्छ । अहिले पनि काम भएन भने कम्युनिष्टहरुले कहिल्यै पनि काम गर्न सक्तैन । जे जे गर्ने भनेको छ, ती सबै काम तत्काल थाल्नुपर्छ । काम थालेन भने यो सरकारलाई हराउन कांग्रेस अर्को निर्वाचनमा मत माग्न नै जान पर्दैन । निर्वाचनमा उम्मेदवार मात्र उठाए पुग्छ । स्पष्ट बहुमत ल्याउँछ । यदि कम्युनिस्टले जनताको पक्षमा काम गर्न थाल्यो भने कांग्रेसले अर्को दुई वटा निर्वाचनमा उम्मेदवारी नै नदिए हुन्छ । तर, अहिलेको सरकारले विपक्षीले काम गर्न दिएन भनेर कराउनु भनेको आफ्नो हैसियत बिर्सनु हो । सुरु मै हैसियत बिर्सिएर ओराले लाग्यो भने ऊ कहिल्यै पनि माथि उठ्नै सक्तैन । तसर्थ माथि उठ्ने वा तल झर्ने भन्ने हात विपक्षीको छँदै छैन । सबै बल सरकारमै छ । आफूलाई कता लैजाने सरकारमा बस्नेहरुले नै निधो गर्ने हो । अरुको विरोध र समर्थनले केही लछारपाटो लगाउने छैन । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)